Niitii fi ilmoon Al-Bagdaadii Libaanos keessatti qabamuun isaanii ifa godhame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Niitii fi ilmoon Al-Bagdaadii Libaanos keessatti qabamuun isaanii ifa godhame
Niitiin fi ilmoon geggeessaa garee Biyyoota Islaamaa (ISIS) Abu Bakr al-Bagdaadii Libaanos keessatti qabamuu isaanii gabaasaaleen garagaraa mul’isutti jiran. Akka angawaa biyya Libaanos tokkotti, maqaan isaa akka dhahamu kan hinfeene, niitiin Al-Bagdaadii fi daa’imni isaa guyyaa 10 dura kan harka mootummaatti kufan. Maddi oduuwwannii waa’ee lammummaa niitii Al-Bagdaadii irratti odeeffannoo adda addaa laatutti jiru. Haata’uu garuu, gabaasni hedduun lammummaa isii Sooriyaa ykn Iraaq jechuun addeessaniiru. Qorannoo DNA daa’ima (ganna 8) irratti godhameen daa’imnis kan Al-Bagdaadii ta’uun isaa mirkanaayeera.
Akka gaabaastotaatti maatiin Al-Bagdaadii kuni kan qabame naannoo daangaa Sooriyaa fi Libaanos irratti. Adamsanii qabuu kanaanis angawoonni Libaanos kan milkaayan dhaabbilee basaastuu biyyoota garagaraa woliin wolitti dhufeenyaan hojjachuudhaan. Niitiin Al-Bagdaadii, Sajaa al-Dulaamii, namoota 150 baatii Bitootessaa keessa woljijjiirraa hidhamtootaa mootummaa Sooriyaa fi al-Qaa’idaa jiddutti godhameen kanniin gadi lakkifaman keessaa tokko turte. Sajaa al-Dulaamiin niitii Al-Bagdaadii isii hangafaa yoo taatu, namni hangas Al-Bagdaaditti kalaahu yoo qabamu yeroo jalqabaatiif.
Previous articleKaaba Keeniyaatti hojjattoonni albuudaa 36 ajjeefaman
Next articleSteefen Hokiing roobootonni (Artificial Intelligence) dhabamiinsa sanyii namaaf sababa ta’uu danda’u jedha